सबैलाई मनपर्ने अङ्गुर - एक दाखको बोट, बारहमासी रूख बाली। जहाँ त्यहाँ समर्थन छ, प्रकृति मा, दाखको बोट lashes, पत्ते प्रशस्त साथ overgrown पत्ते को एक सेट खेल्छ। मानिस, मीठो रसदार र सुगन्धित जामुन खातिर लागि संस्कृति खेती।
अङ्गुर को ट्रेल्लिस कोड गर्न मार बांधन, झाडी हुर्किसकेका छन्। चुनिएको गठन सिस्टम सालाना अनावश्यक हाँगाहरू काटन, कायम छ। यदि झाडी गठन गर्दैन, पोषक मार को विकास को लागि प्रयोग गरिने छ। फलस्वरूप, inflorescence भाग सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो टाढा र दोषपूर्ण समूहहरु बाँकी विकसित। तथापि, ट्रिम र बारम्बार निको नगर्ने घाउ inflicting सम्बन्धित दाखको बोट गठन। त्यसैले, यो प्रक्रिया पनि बोट धेरै क्षति पैदा बिना बाहिर competently लगे गर्नुपर्छ।
एक बिरुवा छनौट
कम्तिमा पचास सेन्टिमिटर हुनुपर्छ पलायन शीर्ष गर्न एडी देखि लम्बाइ; साईट माली अंगूर बिरुवा केही स्तर भनेर थाहा गर्न आवश्यक रंग - हल्का खैरो; एक चार वा पाँच तन्तु परिपक्व हुनुपर्छ; पाँच मिलिमिटरमा भन्दा कुनै कम - बीस सेन्टिमिटर र व्यास - पन्ध्र - (escaping बिना) को बिरुवा को लम्बाइ। साथै, यो सुकेको हुँदैन वा, अस्वीकार्य necrotic स्थलहरू र growths बिग्रेको छ। जरा कम्तिमा तीन हुनुपर्छ, र तिनीहरूले विभिन्न पक्षले स्थित गर्नुपर्छ।
सही फारम छनौट
यो धेरै आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ:
स्थानीय climatic अवस्था र चयन गरिएको अंगूर विविधता विशेषताहरु पालन;
उच्च पैदावार प्रदान गर्न;
सुरक्षित तापमान उतार चढाव देखि shrub र बाली;
को ब्रश ट्रिम गर्न, rejuvenate नियमित अवसर प्रदान गर्नुहोस्।
सबै प्रकारका छ प्रकार मा विभाजित छन्:
one- र दुई-पक्षीय;
फारम को विकल्प जहाँ झाडी विकास छ ठाँउ मा निर्भर गर्दछ, र यसको ग्रेड मा।
अङ्गुर चिनार, ओखर र बलियो र राम्रो-विकास जराको छ कि अन्य प्रजाति संग छिमेकी रुचि छैन। तर यो एकदम ब्रश र करौदा currant, साथै स्ट्रबेरी उपयुक्त छ। विशेषज्ञहरूले हार phylloxera जोगाउँछ जो साग अन्तर्गत बोटहरू रोपेर गर्न सल्लाह।
पहिलो वर्ष: हामी झाडी गठन शुरू
राम्रो दाखको बोट वृद्धि लागि विशेष गरी पछि रोपण को पहिलो वर्ष महत्त्वपूर्ण छ। एक शक्तिशाली र बलियो मार बढ्न गर्न गर्मी - the माली को मुख्य कार्य। तिनीहरूले मार हुनेछ ब्लूम तन्तु पछि र, तपाईं दाखको बोट को गठन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो वर्ष - यो समय, जब मूल देखि आउने, कट वा बाहिर तोड्न सबै जवान मार गर्न। तिनीहरूले बाहिर मात्र सबैभन्दा शक्तिशाली दर्शाउन। पछि, उहाँले एक दीर्घकालीन भाग्ने (स्लिभ), गिरावट क्रप पछि जाडो लागि लुकाउन सजिलो हुने परिणत हुनेछ। यसको टाउको झाडी आधार हुनेछ, यो जो को, साँच्चै, झाडी गठन हुनेछ आस्तीन देखि diverge हुनेछ।
भाग्ने एक ट्रेल्लिस कोड आवश्यक हुनेछ। सुरु गर्न, जो otrostochek बाँध गर्न गर्न किला फिट। समय समयमा, यस तिनीहरूलाई 1-2 पात छोडेर, एक जवान दाखको बोट prune laterals सम्पूर्ण लम्बाइ साथ जमीन देखि 1 मीटर को दूरी मा।
बुश को उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, उहाँले यस्तो छ कि सबै पोषक संयंत्र सबै शाखा गर्न समान रूप आउन आकृति दिनुपर्छ। को दाखको बोट गठन को तरिका, त्यहाँ भिन्न छन्। उदाहरणका लागि, यो अंगूर को एक कवर लागि प्रशंसक प्रणाली संग chetyrehrukavnaya विकास गरे। जब यो मात्र होइन उत्पादकत्व बढ्छ, तर पनि मूल सिस्टम को स्थिर ब्यालेन्स कायम र पत्ते छ। बुश जाँगरको प्राप्त। यसबाहेक, प्रक्रिया फल पकने accelerates। सहमत, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
प्रशंसक सर्किट मा दाखको बोट को गठन द्रुत छ। यो फारम कायम गर्न सजिलो छ, तर त्यहाँ गम्भीर कमियां छन्। सबैभन्दा तिनीहरूलाई को महत्वपूर्ण - तयार गर्दा अनावश्यक उच्च श्रम लागत र जाडो अंगूर लागि आश्रय। प्रशंसक besshtambovuyu सबैभन्दा दाखको बोट ट्रेल्लिस कोड उच्च ridging बाट हट्न बिना आंशिक ढाक्न प्रयोग formirovke।
प्रत्येक grower कसरी आफ्नो क्षेत्र को अवस्था बाट, को दाखको बोट को गठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। एक कवर, एक कवर वा poluukryvnoy - आकार पनि बढ्दै छन् के किसिम मा निर्भर गर्दछ।
हालैका वर्षहरूमा यो विधि विशेष गरी प्रचलित भएको छ। यसको मुख्य विशेषता - सामान्यतया तेर्सो वा obliquely, ठाडो प्रबन्ध जुन एक वा दुई हतियार उपस्थिति। तिनीहरूले फल लिङ्क हुन्। उच्च-yielding प्रजातिहरू लागि दाखको बोट को बस यस्तो गठन सिफारिस गरिएको। निम्नानुसार तेर्सो cordon बनाएको छ।
पहिलो वर्ष बिरुवा मा एक, अधिकतम दुई जवान मार हुर्किसकेका। दोस्रो वर्षमा जो एक वा दुई cordon को या त पक्षमा बढ्दै द्वारा गठन गरिएको छ। आफ्नो लम्बाइ मार को वृद्धि मा निर्भर गर्दछ। यो अब तिनीहरूले cordons गठन गर्न सकिन्छ अब जो छन्। हाँगाहरू तन्तु बाहिर गोली र धेरै छिटो मार बढ्न सुरु भएपछि मा, उनि, बाहिर thinned हुनुपर्दछ वनस्पति (तीस - दोश्रो देखि चालीस सेन्टिमिटर) छोडेर मात्र। शरद ऋतु मा जवान मार कुनै अधिक तीन प्वालहरू छोडेर कटौती छन्।
एकै समयमा तथापि, दाखको को गठन त्यहाँ अन्त गर्दैन। तेस्रो र पछि वर्ष मा बायाँ छलछामको गाँठो जवान फल एकाइहरु संक्षिप्त छलछामको गाँठो प्रतिस्थापन र फल तीर समावेश देखापर्ने। गठन दाखको बोट cordon विधि ठाडो ट्रेल्लिस कोड मा प्रदर्शन गरिएको छ। सुरुमा, यो काठ pegs प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।
द्रुत गठन दाखको बोट
अन्य फल बिरुवाहरु fruiting को तीव्र शुरू देखि दाखको बोट फरक। अक्सर, एक वर्ष पछि उहाँले पहिलो फसल दिन्छ। यो सुविधा थप प्रारम्भिक fruiting गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो विधि प्रयोग गर्न, तपाईँले बलियो त्यसपछि एक स्थायी ठाउँमा लगाए छ जो, shkolke मा बिरुवा आवश्यक छ।
त्यसैले, हामी दुई चार मार देखि बढ्न आवश्यक छ। लेट मे मा, आफ्नो मोटाइ सात मिलिमिटरमा भन्दा कम हुनुपर्छ। प्रारम्भिक जुन मा, यी मार छोड्न र मार कट छन्। यो बिन्दुमा, जवान शाखा पहिले नै पाँच सात पानाहरू छ। को coining मार एक इच्छुक स्थिति माथि गाँसिएका, तिनीहरूलाई अलग फैलाउने र एक ट्रेल्लिस कोड मा समाधान पछि। एक हप्ता पछि तिनीहरूले Pasynkova प्रक्रियाहरू देखिन्छन्। गर्नुपर्छ शीर्ष दुई छोड्नुहोस्। तिनीहरूले ठाडो बाँध्दा। बाँकी suckers कटौती छन्। रूपमा पहिलो वर्षमा सम्भव बलियो बोटहरू धेरै बढ्न - यो विधि को मुख्य उद्देश्य। अङ्गुर नियमित र प्रशस्त मात्रामा रासायनिक मल संग खुवाउनुभयो, पानी हाले गर्नुपर्छ।
निम्न वर्ष, जवान झाडी को बल मा निर्भर गर्दछ, दायाँ kolichnstvo मार बायाँ (ताकि अधिभार छैन)। एउटै पहिलो फसल बारेमा भने गर्न सकिन्छ। "परीक्षण मा।" एक वा दुई समूहहरु छोड्न सबै छ।
वसन्त मा दाखको बोट को गठन
छाँट्ने र जवान बोटहरू को आकार दिन अनुभवी winegrowers मात्र वसन्त मा बाहिर छ। पछि वर्ष मा, यो काम, गिरावट मा पूरा गर्न आश्रय बिरुवाहरु अघि मनमोहक छ।
पहिलो गर्मी को शुरू संग अङ्गुर तेजी बढ्न र विकास सुरु हुन्छ। एकदम अक्सर जगाउन निष्क्रिय आरक्षित तन्तु नयाँ मार आवश्यक छैन भनेर बढ्न - तिनीहरूले केवल झाडी thickened। Stepchildren पछि पहिलो पात तिनीहरूलाई देखिन्छ मेटिने गर्न देखिन्छन्। दाखको बोट एकदम lengthened। आफ्नो परिपक्वता को समय nipping आवश्यकता र जवान मार chasing, वृद्धि।
तेर्सो स्थिति गत वर्ष गाँसिएको बोटहरू देखि, वसन्त मार देखिन्छन्। ठाडो तिनीहरूले ट्रेल्लिस कोड सम्म बाँध गर्नुपर्छ। बिस्तारै मार बोटहरू हुन्छन्।
युवा बोटहरू inflorescences देखिन्छन्। विविधता आधारमा, संख्या फरक हुन सक्छ। जवान झाडी लागि खतरनाक हुन्छन्, एक उच्च उपज छ कि ती। उहाँले धेरै फलस्वरूप कमजोर भएको जामुन को परिपक्वता, दिनुहुन्छ आफ्ना सबै शक्ति तन्तु र बोटहरू परिपक्व समय छैन। त्यसैले, अर्को वर्ष बाली काट्ने गरिब हुनेछ, र झाडी गरिबी बढ्नेछ। एक झाडी कसरी inflorescence बिदा? सही जवाफ र सल्लाह तपाईं कुनै पत्राचार छैन हुनेछ। यस्तो ज्ञान अनुभव आउँछ। मुख्य कुरा - सुनको नियम पालन गर्न: युवा ब्रश लोड काट्नुहोस्। सबै आफ्नो समय छ।
यो प्रक्रिया पनि वसन्त मा बाहिर छ। Shears राम्ररी विकास पात सम्म दाखको बोट माथिल्लो भाग हटाउन, बोटहरू मुख्य भाग को व्यास नजिक को व्यास जहाँ।
अङ्गुर, हाम्रो देशमा चाहनुहुन्छ वयस्क र बच्चाहरु दुवै। सुगन्धित जामुन को एक महान फसल प्राप्त गर्न, राम्ररी जवान ब्रश हेरचाह कसरी सिक्न।
Gloxinia: tuber रोपण। Gloxinia tuber कसरी रोपेर गर्न? बाट tuber Gloxinia कसरी बढ्न?
स्याउको रूख चेरी। विविधता को विवरण
जाडो मा Altai हिमालहरूको मनोरञ्जन केन्द्र। सक्रिय बिदा
संस्कृति र कला को Altai राज्य एकेडेमी (Agachi): संकाय, समीक्षा
हिकरी: को छत, विशाल बोर्ड। Laminate "अखरोट"